Orinasa milina fanodinana Gantry haingam-pandeha any Sina | Oturn
Product manual SG1614 dia nandalo ny fizotran'ny fivondronana tsy manam-paharoa an'ny orinasa ary naneho ny fahamendrehana avo lenta, ny fahombiazana avo lenta ary ny fitoniana avo eo amin'ny tsena.
Boky torolàlana 1.Product
Ny SG1614 dia nandalo ny fizotran'ny fivorian'ny orinasa ary naneho ny fahamendrehana avo lenta, ny fahombiazana avo lenta ary ny fitoniana avo eo amin'ny tsena.
Fitaovana milina miavaka dia hita taratra amin'ny indostrian'ny mpamokatra bobongolo, ny indostrian'ny famokarana fiara, ny fitaovana fitsaboana marina, ny indostrian'ny aerospace ary ny sehatra hafa. Miaraka amin'ny haitao mahatalanjona sy ny fahombiazan'ny milina tena tsara dia nahazo fiderana tsara izy ireo ary notohanan'ny mpanjifa vaovao sy taloha. Ary matoky.
2. fampidirana fampisehoana
Ny firafitry ny fiaramanidina dia mandray endrika voavolavola tohanan'ny fanohanana feno, sy ny fanahafana ny solosaina
Ny famakafakana ny firafitra ara-batana dia tanterahina amin'ireo ampahany manan-danja. Ny fototra masinina
mitondra hery 4000kgf ary ny fiovana dia ao anatin'ny 0.01mm. Afaka mahazaka tanteraka ny
fepetra henjana amin'ny fanapahana.
Ny tsanganana dia mandray rafitra gantry mitambatra ary manitatra ny faritra fanohanana mba hiantohana ny fihazakazahana sy ny haingam-pandeha haingam-pandeha izay afaka mampitombo ny
fanamafisana ny masinina sy ny fitoniana amin'ny androm-piainana. Ampiasaina amin'ny spindle haingam-pandeha haingam-pandeha, afaka mamaly mora foana ny fepetra takiana amin'ny fanapahana henjana mafy amin'ny vy vita amin'ny firaka izy.
Ny mpitari-dalana ho an'ny kilasy kilasy voalohany izay nohafarana avy any Alemana sy Taiwan
baolina visy dia ampiasaina mba hiantohana ny mari-pahaizana geometrika sy ny fametrahana mazava tsara ny rafitra ankapobeny, ny fitoniana ary ny fiainam-panompoana.
Ny servo drive dia mampiasa marika alemana kilasy voalohany, izay ambony noho ny mpifaninana ao
ny ambaratonga mitovy amin'ny hazavana famoahana ary ny fahamendrehana amin'ny toerany.
Ny famolavolana haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha dia manome antoka tanteraka fa ny
spindle dia afaka mitazona fandidiana azo antoka sy marina mandritra ny hafainganam-pandeha mitohy
fandidiana, ary mety hahatratra ny vokatra azo avy amin'ny fikarakarana avo lenta sy avo lenta mandritra ny fizotry ny fanapahana.
Ny hafainganam-pandeha farany avo indrindra amin'ny axis telo an'ny fitaovan'ny milina dia mety hahatratra 24m / min, ary ny hafainganam-pandeha dia mety hahatratra ny 0-10M / min, izay mampihena ny fotoana fanodinana ary manatsara ny fahombiazan'ny asa. Ny spindle dia miantoka ny famokarana herinaratra avo
ary ny fahamendrehana sy ny fahamendrehana tsara mandritra ny asa fanapahana. Eo ambanin'ny fepetra fanapahana haingam-pandeha, ny lahasa fanodinana dia azo tanterahina miaraka amin'ny fahombiazany tsara kokoa.
Ny rafitra fikirakirana haingam-pandeha dia manohana ny asan'ny faminaniana amin'ireo programa famahanam-pahefana lehibe, ary afaka maminavina torolàlana momba ny asa 250-segondra mba hahazoana antoka fa tsy hisy fahatarana amin'ny fanapahana haingam-pandeha, izay afaka mitsitsy ny fotoana fandefasana ary mampitombo ny fahombiazan'ny fikirakirana 20 %.
Fizarana axis X (mm)
Y axis dia mandeha (mm)
Z axis fitsangatsanganana (mm)
Faritra latabatra asa (lava x ny sakany) (mm)
Ny halaviran'ny velaran'ny latabatra mankany amin'ny faritra farany spindle (mm)
Ny sakan'ny varavarana (mm)
Milanja lanja (T)
Rafitra fanaraha-maso: Siemens 828D
Rafitra fanaraha-maso: Mitsubishi M80A. FANUC 0i M
Rafitra fampangatsiahana ampela
Namboarina tamin'ny spindle 20000rpm (HSK-A63)
Ny famafazana tsiranoka amin'ny spindle
Fefy feno fonony ambony
Latabatra fihodinan'ny cnc (ny axis faha-4)
Jiro famantarana loko 3, jiro miasa
Famotopotorana momba ny workpiece
Fitaovana fanompoana mahazatra
Mpitondra chip Helix
Air conditioner an'ny kabinetra elektrika
Teo aloha: Masinina manamboatra gantry adidy mavesatra
Manaraka: Fitrandrahana sy fikitihana ny milina mitambatra